ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi UPaul Scholes Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; "Ginger Ninja". Ibali lethu le-Paul Scholes yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nezinto ezininzi ezingabonakaliyo (ezingaziwa) ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngobuchule bakhe obuphakathi kodwa abambalwa bacinga ukuba nguPaul Scholes Bio onomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UPaul Scholes wazalelwa kwiThemba leThemba ePendleton, Greater Manchester, ngomhla we-16th ngoNovemba 1974. Wazalelwa kunina, uMarina Scholes noyise, uStewart Scholes. I-Scholes ivela kwimvelaphi yase-Ireland. UPawulos wazalwa ene-asthma. Ngaphezu koko, njengomntwana, uPawulos wahlushwa isifo se-Osgood-Schlatter, isimo semadolo.
UPawulos wakhula noodadewabo, uJoanne Scholes. Intsapho yakhe yafudukela eLangley, e-Greater Manchester xa umntwana uPaul wayeyiinyanga ezili-18. Bahlala kwindlu kwiBowness Road kunye neCongress Drive. UPawulos waya eSt Mary's RC Primary School eLangley. Yilapho afunde khona ibhola. Iqela lokuqala ayeyidlala ngalo yayinguFreshley Furrows. Njengoko uPawulos wakhula waba ngumntwana osemncinci, ukufana kwakhe kweminye imidlalo efana nekhilikithi yabonakala. Kwakhona kwakuyithuba elithile lokufumana ucingo oluvela kwi-United emva kokubhaliswa ngokuphumelelayo kwinkqubo yobutsha abasemva.
Ngeminyaka eyi-14, waqala ukuqeqesha kunye ne-Manchester United eyayizalisekisa amaphupha akhe ebuntwaneni.
Kamva wajoyina njengomqeqeshi ekushiye iKardinal Langley Roman Catholic HighSchool eMiddleton ngexesha lehlobo le1991. Kwikota yakhe yokugqibela esikolweni, wakhethwa ukumela i-Great Britain Schools Schools kwibhola. Emva kokuphawula inkqubela yakhe nokuzimisela kwibhola eNgilani, iManchester United yamnika inkontileka enkulu. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
UPawulos washada nomntwana wakhe osemncinci, uClaire (née Froggatt) eWrexham ngoFebruwari 1999. Ubekhona kulo lonke ixesha lakhe, nangona wayengu 19 kwaye wenza i-first-start yakhe ye-United e-Port Vale ngoSeptemba 21, 1994.
Esi sibini sithanda ukuhlala kwidolophana e-Greater Manchester. Unabantwana abathathu, intombi enye kunye noonyana ababini. Omdala nguArron, udadewabo uAlicia kunye no-Aiden omncinci.
Ngelishwa, unyana oncinci u-Paul Scholes u-Aiden unesifo se-autism. Unenkathazo enzima yokufunda, ngoko akakwazi ukuthatha inxaxheba kwiimidlalo ezininzi ngeli xesha, nangona yena
Uyamthanda ngokubhukuda kwakhe njengoko kuboniswe ngezantsi.
U-Arron no-Alicia bayamangalisa nge-Aiden. Akunakuba lula ukuba nomzalwana kwiimeko zakhe kodwa bajamelane nayo ngokukhawuleza. Unyana wokuqala kaParron uAron ungumqhubi omkhulu waseManchester United, unomdla. Uyakuthanda nezinye imidlalo, ngokukodwa ikhenkethi njengoko kuchazwe ngezantsi.
U-Alicia ungomnye wemvelo kwizemidlalo, ngokukhawuleza ejikeleze inkundla yebhola yebhola yebhola kunye nokuzimisela ukuba ahambe malunga nantoni na. Uye wenyuka kakhulu ekhwele. Unombono omnandi omncinane obizwa ngokuba yiBoston, echazwe ngezantsi.
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Ecaleni likamama, ugogo wakhe wayevela kwiRiphabhlikhi yase-Ireland ngelixa uyise omkhulu wayevela eMntla Ireland. Nangona wayedlala ikhenkethi kodwa wayethanda ukuba ngumdlali webhola.
Ngesinye isikhathi, i-GANG ye-knife-wielding thugs i-star-fearing parents of Manchester United inkanyezi uPaul Scholes ngaphambi kokuba iinqwelo zabo zokunethezeka. UStewart noMarina Scholes balele kwikhaya labo elincinci kwi-cul-de-sac e-Rhodes xa abahlaseli be-balaclava bashaya iindawo zabo.
Lo mbhangqwana wawunomdla kodwa wawushukunyiswa kakubi kwaye uNkk Scholes wathi: "Kwakubuhlungu."
Omnye ummelwane wathi: "Kwakukho amabhinqa amane e-balaclavas. Ndakuva i-bang, ndaphuma ndaza ndawabona bemi emnyango ngamnye we-Audi. Bayixhobile, ngoko ndathatha isando. Ababini babo babalekela kwaye babini bahamba emotweni. Babengabantwana nje, kodwa babesazi kakuhle into ababeza kuyo - isibini sazo sinemikhono kwaye enye yayithwele igogi. "
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
Unomntu onamahloni kakhulu entsimini kwaye ukhetha ukuhlala ubomi obuqhelekileyo.
Apha, siza kuwe ezinye iimpawu zobuntu bukaPaul Scholes.
Amandla: UPawulos unobulumko, unesibindi, unomdla, unenkani, kwaye ngokwenene, ungumhlobo wenene.
Ubuthathaka: UPawulos wayenokungathembeli, umona, ukufihlakele, ulwalamlo
Oko uPawulos Scholes akuthandayo: Uyakuthanda iInyaniso, nantoni na eyinyani, ukukhwaza abahlobo abaselula njengento echazwe ngezantsi, kunye nebhola lebhola.
Oko uPawulos Scholes akuthandiyo: Ukungathembeki, ukutyhila iimfihlakalo kunye nabantu abanomdla.
Isishwankathelo, uPawulos ungumntu onomdla kwaye onamandla. Bazimisele kwaye banqume kwaye baza kuphanda baze bafumane inyaniso emva kweyiphi inkolelo.
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -I-Blurry Vision Man
UPaul Scholes wayekhe aphuma ngaphandle kweqela ngenxa yombono ophazamisayo.
Ingcamango kaPaul Scholes igxotha ingqondo yakho ngemibono yalezo zidumi ezidumileyo kunye neenjongo ezintle. I-Scholes, kwi-credit yakhe, yayinjengokhozi. Iibhola zakhe zaza kuphakama emoyeni kwaye zinyuka phantsi emlenzeni wokujoliswe kuyo.
Kuthekani ukuba ndiza kuthetha ukuba indoda enjalo iliso yayisesithebeni lesigqirha ngenxa yemibono ephosakeleyo? Ewe, kunjalo. Kwi-2006, isiqingatha sesibini sonyaka, uPaul Scholes wayesebenze umbono obonakalayo kwaye waphathwa ngaphandle kweenyanga ezine ezilungileyo. Ngombulelo, waphinda wabona!
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -3rd Uninzi lwekhadi eliNgciniweyo uMqoqi weNkulumbuso
Inyaniso eyinqaba kakhulu ngaye kukuba unalo irekhodi elimangalisayo lokuba yi-3rd unomgca wekhadi eliphuzi kwimbali yeNkulumbuso yeNigeria. Ngamanani amakhadi aphuzi e-99 kunye namakhadi abomvu a-4, usoloko egxeka ngenxa yoqeqesho lwakhe. Akunakuphela kulo, kwiimidlalo ze-Champion League uye wakhankanywa malunga namaxesha angama-32. Kodwa ke uPawulos akafumani amakhadi aphuzi ngaphezulu Wayne Rooney kwaye UGareth Barry.
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Boot Boot
UPaul Scholes wathenga iibhothi kwivenkile yasekuhlaleni yaseManchester United. Xa wayesazi ukuba uya kubuyela kwi-United kwi-FA Cup mdlalo, wayenengxaki ezininzi. Ngoxa iibaluleke ngakumbi ezifana nokuqina kwakhe kwahlulwa, akazange abe neebhotile zokugqoka nokudlala.
Ngoko, umdlali webhola oqhelekileyo ukwenze ntoni? Wayeza kubabizela umxhasi wakhe kwaye wenza isicelo. I-Scholes, eyayisoloko ikhetha ukudlala phantsi izinto zenyukela kwisitoreli sendawo kwaye zithenge iisethi ezintsha zeebhotile £ 40. Kwaye, wayenxibe eli qhosha xa ebuyela eManchester City kwi-FA Cup. Ngoku, nguPaul Scholes kuwe!
UPaul Scholes Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Oko bacinga ngaye
Ngaphandle kokuphika, uPaul Scholes yinto ekhethekileyo.
Ryan Giggs umbiza ngokuba yi-United "Umdlali omkhulu kunabo bonke". Zinedine Zidane kwaye Pep Guardiola bobabini babecinga ukuba nguye "Ungumdlali ongcono kwisizukulwana sakhe".
"Enye yam yokuzisola kakhulu kukuba ithuba lokudlala kunye naye alizange lizibonakalisa ngexesha lo msebenzi wam.", uthe uZidane. Ngoku, ngokuqinisekileyo loo nto ibonisa ukuba uPawulos wayengumdlali oqhelekileyo.
Pele kwaye Eric Cantona wajika waya kumdlalo wakhe wokuhlaziya. Inkwenkwezi yaseBrazil yaseXrase yaseSrazil uSocrates yathi wayethanda ukubukela "Inkwenkwe eneenwele ezibomvu kunye nekhati elibomvu". Xavi uthe uScholes nguye "Epheleleyo" umgcini ophakathi wayebukele. Akubi kumfana ovela eMiddleton eNorth Manchester oye wanda kuphela ku-5ft 7in waza wafumana isifo se-asthma yakhe yonke imisebenzi.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda i-Paul Scholes Childhood Indaba kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
I-Dominic Solanke Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts